‘९९ प्रतिशत नेपाली आमाको स्तनपान तरिका ग’लत’ यसो भन्नु हुन्छ बालरो’गका विशेषज्ञ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘९९ प्रतिशत नेपाली आमाको स्तनपान तरिका ग’लत’ यसो भन्नु हुन्छ बालरो’गका विशेषज्ञ !
काठमाडौं। बालरो’गका विशेषज्ञ चिकित्सकले ९९ प्रतिशत नेपाली आमाले आफ्ना शिशुलाई गराउँदै आएको स्तनपान ग’लत रहेको बताएका छन्। नेपाली आमाहरुले शिशुलाई स्तनको मुन्टोमात्रै चुसाउने गरेको तर सही रुपमा चुसाउनको लागि स्तनको मुन्टो वरिपरिको कालो भाग (एरिओला) सम्मै शिशुलाई चुस्न दिनुपर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकको सुझाव छ ।
२८ औं विश्व स्तनपान सप्ताहको अवसरमा चिमायल च्यारिटीले शनिबार गरेको कार्यक्रममा बालरो’ग विशेषज्ञ चिकित्सक डा. मञ्जेश्वरी उलकले भनिन्, ‘स्तनको मुन्टो दूध आउने बाटोमात्रै हो । त्यसैले एरिओलासम्मै शिशुलाई चुस्न दिनुपर्छ।’ रोटरी क्लव अफ मध्यपुर, विनरह्वील मध्यपुर र रोट¥याक्ट क्लव अफ मध्यपुरको सहयोगमा भएको उक्त कार्यक्रममा उनले जति स्तनपान गराइन्छ, त्यति नै आमाको दूध बढ्ने जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूध शिशुको लागि पर्याप्त भएको स्पष्ट पारिन् ।
‘स्तनपान गराउने तरिका नै नमिल्दा शिशुले राम्ररी स्तनपान गर्न पाउँदैन’, डा. उलकले थपिन्, ‘शिशुलाई मुन्टोमात्रै चुसाउँदा कति आमाको स्तनबाट दूध नै आउँदैन । जसले शिशु था’केर पछि दूध चुस्नै मान्दैन।’
उनले ग’लत स्तनपानका कारण एकातिर शिशुहरु कुपोषणको शिकार हुने र अर्कोतिर आमालाई स्तनसम्बन्धी विभिन्न रो’गहरु बढिरहेको स्पष्ट पारिन् । स्तनपान शिशुको लागि पहिलो एवं प्राकृतिक खोप भएको भन्दै उनले शिशुलाई स्तनपान गराउन आमाको स्तनको आकारले कुनै असर नगर्ने बताइन् । ‘स्तन ठूलो वा साना भएकै कारण शिशुलाई गराउने स्तनपानमा कुनै असर गर्दैन’, डा. उलकले भनिन्, ‘शिशुले दूध नचुसेसम्म दूध बन्दैन । शिशुले दूध चुस्न थालेपछि आमाको शरीरमा दूध बन्ने हार्मोन उत्पादन हुन्छ । त्यसैले राम्ररी स्तनपान नगराउँदा दूध बन्ने हार्मोनको विकासमा असर गर्छ।’
‘शिशुलाई स्तनपान गराउँदा आमाको शरीरबाट दुई थरिको दूध उत्पादन हुन्छ । सुरुमा ल्याक्टोज बढी तर फ्याट र प्रोटिन कम भएको दूध आउँछ । पछि ल्याक्टोज कम हुँदै फ्याट बढी भएको दूध आउँछ । फ्याट बढी भएकाले बच्चा चाँडै अघाउँछ’, उनले थपिन्, ‘त्यसैले एकपटक स्तनपान गराउँदा पूरै दूध निखार्ने गरी खुवाउनुपर्छ । यसले पछि आमालाई स्तनसम्बन्धी समस्या तथा रो’ग पनि हुन दिँदैन।’